Su'aalaha La Weydiiyo | Ningbo Chinahong Traffic Qalabka Co., Ltd.
Qiimaheena way kala duwanaan karaan iyadoo ku saleysan saadka iyo sababaha kale ee suuqa. Kadib markay shirkadaada nala soo xiriirto si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, waxaan kuu soo diri doonnaa liiska qiimaha la cusbooneysiiyey.
Haa, guud ahaan waxaan u baahannahay tirada ugu yar ee amar ee amarrada caalamiga ah.
Ma bixin kartaa macluumaad tayo leh oo alaab ah?
Haa, waxaan ku siin karnaa badeecadaha badankood, oo ay ku jiraan falanqaynta xogta baaritaanka ee qalabka ku jira sheyga;
Waa maxay celceliska waqtiga dhalmada?
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa ilaa 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga dhalmada waa 20-30 maalmood kadib helitaanka deebaajiga. Taariikhda diridu waxay dhaqangelaysaa kadib (1) helitaanka deebaajigaaga, iyo (2) waxaan haysanaa ogolaanshaha ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii waqtigeenna bixinta aan la kulmi karin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan la kulan shuruudahaaga iibka. Xaaladaha oo dhan, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan ku dabooli karno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood, waan sameyn karnaa.
Qaabkee lacag bixinta ah ayaad aqbashaa?
Waxaad ku bixin kartaa akoonkeena bangiga, Western Union ama PayPal:
30% deebaaji ayaa horay loo bixiyaa, taas oo 70% u dhiganta dheelitirka nuqulka biilka rarka.
Ma dammaanad qaadeysaa gaarsiinta alaabada oo aamin ah oo la isku halleyn karo?
Haa, waxaan nahay soo saare, wareegga nafsad ahaanteena ayaa xakamayn kara.
Sidee ku saabsan qiimaha dhoofinta?
Qiimaha rarku wuxuu kuxiranyahay sida aad uxulato helitaanka alaabada. Maraakiibtu waa xalka ugu fiican ee tiro badan. Qiimaha dhoofinta saxda ah, waxaan kaliya ku siin karnaa macluumaadka oo faahfaahsan ka dib markaad ogaato tirada, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Sidee loo xaliyaa cusbooneysiinta alaabada
Guud ahaan, haddii ay jiraan kayd aad u tiro badan, waxaan kula xiriiri doonnaa baakadda dibedda ee sheyga, waxaana ugu wanaagsan in horay loo sii ogeysiiyo.
Nooca Gaarka ah Wiper Blade, Ford Edge Rear Wiper Blade, Bas Wiper Blade Wixii Volvo, Muraayada Muraayada Muraayadaha ee Gaariga, Muraayada Muraayada hore, Gaar ah Wiper Blade,